Xiaomi Black Shark 2: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta | Gam akporosis
Xiaomi Black Shark 2: ama egwuregwu ọhụụ na-ewu ewu
Xiaomi hapụrụ anyị ọtụtụ akụkọ na awa ndị a. Ebubela ụdị nke China na Redmi 7 na nso nso a, nke anyị kọọrọ gị akụkọ niile. Ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara ama egwuregwu ọhụụ, nke Xiaomi Black Shark 2. N'ime izu ndị a, enweela ọtụtụ mkpuchi banyere ihe nlere a, nke a nụrụ asịrị maka ngosi ya Ọ ga-abụ March 18, ka o mechara mee. Anyị amataworị ụdị a.
The Chinese ika bụ otu n'ime ihe ndị kasị ugbu a nke a nke egwuregwu smartphones. Na Black Shark 2 a, akara ahụ na-aga n'ihu na nke a. Ekwentị nwere nnukwu ike, ọbụna karịa ndị bu ya ụzọ nweela. A na-atụ anya ka ihe ngosi a pụta ụwa n'ikpeazụ.
Bọchị ole na ole gara aga, nkọwa ọhụrụ gbasara ụdị a bịara, nke mere ka o doo anya na ọ ga-abụ ekwentị nwere nnukwu ike, dịka gosipụtara ụzọ ya si AnTuTu. N'okwu ya, nke a bụ ihe emegoro ka o doo anya. A na-atụ anya ihe dị ukwuu banyere ekwentị Xiaomi ọhụrụ a. Kedu mmezi ụdị a na-eweta?
1 Nkọwapụta Xiaomi Black Shark 2
2 Xiaomi Black Shark 2: Ike na ụdị ya dị ọcha
3 Ọnụahịa na mwepụta
Nkọwapụta Xiaomi Black Shark 2
A nọgidere na-eme atụmatụ njirimara nke ụdị a na ụdị ahụ. Egwuregwu egwuregwu zuru oke, nke doro anya na ọ bụ njirimara doro anya nke ụdị ndị China. Banyere nkọwa, a Black Shark 2 rutere na ndozi dị iche iche. A na-eji ihe nhazi kachasị mma n'ahịa, na mgbakwunye na ịbawanye RAM. Ndị a bụ nkọwa ya zuru ezu:
Ihuenyo: 6,39-anụ ọhịa AMOLED na mkpebi FullHD + (2.340 x 1.080 pikselụ) na 19,5: 9 ruru
NhaziUgboro abụọ: 855
Nchekwa ime: 128/256 GB
Rear igwefoto: 12 MP nwere oghere f / 1.75 + 12 MP nwere oghere f / 2.2 na Flash Flash na mbugharị anya 2x
Igwefoto n'ihu: 20 MP nwere oghere f / 2.0
Batrị: 4.000 mAh na Ndenye Ndenye 4.0 nke 27W
Njikọ: Dual nano SIM, WiFI 802.11 ac, Bluetooth 5.0, aptX na aptX HD, GPS ugboro abụọ, USB Type-C
ndị ọzọ: Igwe okwu stereo ugboro abụọ, ihe mmetụta mkpịsị aka ihuenyo
Usoro njikwa: A gam akporo 9 achịcha
Akụkụ: 163,61 x 75,01 x 8,77 mm
Ibu ibu: 205 grams
Obi abụọ adịghị ya, imewe bụ otu n'ime akụkụ kachasị mkpa na ụdị akara ndị China. Ya mere, nke a Black Shark 2 na-ekwusi ike ahụ anyị hụrụla na nso nso a. N'okwu a, ị nzọ na agba abụọ, Emechara ka oji ma obu ocha. Ya mere na ọrụ ga-enwe ike ịhọrọ Nchikota na ha na-amasị ndị kasị.
Ike bụ akụkụ ọzọ dị mkpa nke ekwentị. N'ime anyị na-achọta Snapdragon 855, ihe nhazi kacha ike na anyị nwere maka ekwentị gam akporo taa. Anụmanụ na-enye gị ike dị ukwuu mgbe ọ bịara inwe ike igwu egwu n'oge niile. Na mgbakwunye, akara ahụ na-ahapụ anyị ọtụtụ njikọta nke RAM, yana otu onye n'ime ha ruru 12 GB. N'ihi ya, na kwesịrị ekwesị na-arụ ọrụ nke ekwentị bụ karịa n'aka.
Na Black Shark 2 anyị enweghị jaketị isi, ọ bụ ezie na Xiaomi emeela ya. N'ihi na ụlọ ọrụ ahụ na-eji a sọrọ stereo ọkà okwu etinyela ya na ngwụcha ngwanrọ nke ngwaọrụ ahụ. Anyị nwekwara ngụkọta nke igwe okwu atọ gbadoro anya na egwuregwu, mmadụ abụọ n'ime ha kagbuo mkpọtụ ndabere na nke ọzọ na-anakọta olu onye ọrụ. Kedu ihe ga-eme ka ahụmịhe egwuregwu ka mma n'oge niile na njedebe a dị elu.
N'aka nke ọzọ, ekwentị a nwere ikike ịmata ihe nkiri, mmegharị, ngwa ọgụ ma ọ bụ ọkpọ, nke mere na ọ ga-ama jijiji dabere na ha. Xiaomi na-akọwa na ebumnuche a iji nye ahụmịhe egwuregwu 4D na ekwentị. Ya mere, Black Shark 2 na-aga jijiji n'ụzọ dị iche dabere na ihe eji eme egwuregwu ahụ. Ihe bụ ihe ọzọ, agbakwunyela ókèala nwere njiko na nke ahaziri iche na ekwentị. Nke a ga - enyere onye ọrụ aka ịpịkọta windo nke ngwaọrụ iji mepụta omume na egwuregwu ahụ. Site na agbapụ, na-agbaga ọtụtụ ndị ọzọ. Ọ na-enye ohere iji ka mma n'oge niile.
Xiaomi Black Shark 2: Ike na ụdị ya dị ọcha
Na ekwentị anyị na-ezute a ọhụrụ mmiri mmiri jụrụ usoro, nke akpọrọ Direct Touch Liquid Cooling System 3.0. Ọ bụ usoro na-ahụ maka ikpuchi mpaghara nke ekwentị nke na-ekpo ọkụ kachasị ọkụ, yana inye aka belata ọnọdụ okpomọkụ na motherboard nke otu. Tụkwasị na nke a, anyị nwere ọnọdụ arụmọrụ kachasị na Black Shark a 2. Ekelere ya, ọsọ nke nhazi ahụ na-abawanye, na-enye ohere iji kwado ọnụego FPS kwụsiri ike n'oge niile. Mgbe anyị jiri ọnọdụ a na ngwaọrụ ahụ, ahịrị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na azụ ya na-enwu.
Ọzọkwa, Xiaomi ekwuola na enwere ọtụtụ ngwa maka ekwentị, nke na-enye anyị ohere ịgbanwe ya n'ụzọ dị ịrịba ama. Anyị nwere GamePad 3.0, nke agbakwunyere n'akụkụ ya abụọ, na-enye ekwentị na bọtịnụ anụ ahụ. Ọ nwere ike ikwe ka egwu egwuregwu ka mma. N'aka nke ọzọ, anyị nwere ọnọdụ nnabata, nke na-enye anyị ohere ijikọ ya na igwe onyonyo. Enwerekwa ikpe dị jụụ, nke bụ ọrụ maka mbenata okpomọkụ nke ekwentị site na ogo 10 naanị na 10 sekọnd. Kedu ihe bụ mgbakwunye na usoro jụrụ oyi nke ekwentị.
Na nke a Xiaomi Black Shark 2 anyị na-ahụ mkpịsị aka mkpịsị aka abanye n'ime ihuenyo. Akara ndị China na-ekwukwa ọzọ na nke a, mgbe ha nwesịrị ya hụrụ na nso nso a na Xiaomi Mi 9. Maka batrị ahụ, anyị nwere ikike 4.000 mAh, nke nwekwara ụgwọ ngwa ngwa 27W. Na njikọ ya na processor ọ kwesịrị inye anyị ezigbo ọchịchị obodo.
Ọnụahịa na mwepụta
Xiaomi Black Shark 2 nwere ike idozi ya na China. Dị ahụ emeelarị ka ọ dịrị na ntinye ọrụ ya ga-eme na March 22 na mba ahụ. Onweghị ihe ekwuru banyere mbido mba ụwa nke ekwentị n'oge a. Ọ bụ ezie na e kwuola ọtụtụ izu na ihe nlereanya a ga-abụ nke a ga-emecha rụọ ọrụ na ahịa ọhụrụ. Ma anyị na-atụ anya ụfọdụ nkwenye n'oge na-adịghị anya.
Banyere ahịa, anyị nwere ọnụahịa nke ụdị anọ ahụ ka emee ya site na ekwentị China. A na-ahapụ ha niile na agba ojii na nke ọla ọcha. Ọnụahịa ha bụ:
Ihe nlere anya nke 6/128 GB ga - eri 3.199 yuan (420 euro iji gbanwee)
Versiondị nke 8/128 GB dị ọnụ na 3.499 yuan, ihe dị ka euro 460 ịgbanwe
Black Shark 2 nke nwere 8/256 GB na-efu 3.799 yuan (ihe dị ka euro 500 iji gbanwee)
Ihe nlere anya nke nwere 12/256 GB ga-eri yuan 4.199, gburugburu euro 550 iji gbanwee
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Xiaomi Black Shark 2: ama egwuregwu ọhụụ na-ewu ewu
Redmi 7: Uzo ntinye ohuru nke Xiaomi bu ihe ndi ozo
Etu esi gbanyụọ (ma ọ bụ gbanye) Google Assistant screen ịgụ ọrụ